Udliwanondlebe noBerna González Harbour: Eyona ncwadana yolwaphulo-mthetho ishushu. | Uncwadi lwangoku
I-Berna González Harbour: Umbhali woluhlu olumnyama olubonisa umgcini uMaría Ruiz.
Sinelungelo kunye nolonwabo lokuba namhla kwibhlog yethu kunye Izibuko laseBerna González (ISantander, 1965): umbhali, intatheli kunye nomhlalutyi woluntu lwanamhlanje kuzo zonke iinkalo. Umsebenzi wakhe wokuba yintatheli unxulumene El País Apho ebambe izikhundla ezibalaseleyo njengomhleli waseBabelia, usekela mlawuli wephephandaba okanye umthunywa okhethekileyo kumazwe angquzulanayo phakathi kwabanye.
Izibuko laseGonzález lingene ngomnyango omkhulu kwinoveli yolwaphulo-mthetho kunye naye Uthotho lwamapolisa olwaluhleli noMkomishinala uMaría Ruiz.
Iindaba Zoncwadi: Ufika kwinoveli ngo-2010, kunye nomsebenzi ophumeleleyo kunye nokudibanisa njengomlobi weendaba kunye nomphathi kwelinye lamajelo amakhulu aseSpain: El País. Ubize ntoni wena malunga noncwadi, malunga nenoveli yolwaphulo-mthetho?
Harbari yaseBerna González:
Uncwadi lwalundibiza kwakude kudala ngaphambi kobuntatheli, kuba ndandisengumntwana. Kodwa andizange ndenze inoveli de kwaba ngu-2010, xa ndiziva ndikulungele. Inoveli yolwaphulo-mthetho sisixhobo esifanelekileyo sokumba kwimingxunya yenyani.
AL: Uqala i-adventure yokubhala kunye ne-protagonist yakho, uMkomishinala wamaPolisa uMaría Ruiz. Emva kwezifakelo ezibini, xa abafundi bebesele becela ukuba nomlondolozi ongaphezulu uRuiz, babheja ekuqaliseni umsebenzi omtsha ngaphandle kwakhe, kwaye kule mali yokugqibela, Iinyembezi zikaClaire Jones, singazonwabela iimeko zakho kwakhona. Ngaba uhlala nini uMkomishinara uRuiz?
BGH: Ndiyathemba njalo, ngaphandle kwamathandabuzo, okoko nje abafundi bendijoyina. Inzima ngakumbi kunemisebenzi ezimeleyo, kuba ukuxhasa imisonto yobomi babalinganiswa abaphambili kufuneka kugcine kungekuphela ukuhambelana kwencwadi, kodwa ulungelelwaniso lwexesha elide olunzima ngakumbi, kodwa ndiyoyika ukuba sele nditshatyalalisiwe. Andizukubulala uRuiz.
AL: Umlinganiswa ophambili ozimeleyo, okrelekrele, ophumeleleyo, ongafunekiyo, onesithukuthezi, oqeqeshiweyo wezengqondo, iimbaleki, ukungabi nabantwana, ongatshatanga, olobufazi, osebenza ngokusisigxina, ongenisiweyo nothembekileyo. Yintoni enika uBerna kuMaria noMaria kuBerna?
BGH: Ngalo lonke ixesha sinikezela ngakumbi omnye komnye, nangona sibala iimpawu ezili-13 ozikhankanyileyo ndicinga ukuba sabelana kuphela ezisibhozo kwaye sahlukile ku-5. Bobabini, mna noRuiz, njengabafazi abaninzi abakhoyo ngoku, sinikezele kakhulu ukuzalisekisa ngaphandle kokuphumla.
AL: Amava akho okwenyani ahluka kakhulu kwaye anamandla emva komsebenzi otyhafisayo njengentatheli yecandelo ethatha inxaxheba ngamaxesha amahle kwimbali yenkulungwane yama-XNUMX neyama-XNUMX. Zingakanani iinyani ezikhoyo kwinoveli zakho? Yimalini yintsomi yoncwadi kwaye ingakanani ubuntatheli obuyintsomi obuphinda bube yimifanekiso yokwenyani kwezentlalo okwangoku?
BGH: Yonke into yintsomi, kodwa ihlala isekwe kumatyala ashukumisayo, andishiya ndididekile ngokwenyani. Ukusuka kumanyundululu e-pedophilia ukuya ekuzibulaleni kwamatyathanga eFrance Telecom okanye ngokudlwengulwa okuhlangeneyo nokwabelwana ngako kwi-wasap, yonke into inonyawo kwinto endingayiqondiyo yinyani. Ukubhala ikwayindlela yokuzama ukuqonda.
AL: Amaxesha otshintsho kubafazi, ekugqibeleni ubufazi ngumba wesininzi hayi nje kumaqela amancinci amabhinqa abekelwe amabala ngenxa yalo. Wena okwisikhundla sakho, uthetha nesandisi-lizwi ngesandla ukhusela ukulingana, uthini umyalezo wakho eluntwini ngendima yamakhosikazi kunye nendima esiyidlalayo ngeli xesha?
BGH: Ndinqwenela ukuba, kwisigqibo ngasinye abasenzayo, amadoda nabafazi balo naliphi na inqanaba lamandla bazibuze ukuba ngaba bamele uluntu na. Ifoto yamandla ayihambelani nefoto yenyani.
Iinyembezi zikaClaire Jones: Ufakelo lokugqibela lomgcini uMaría Ruiz.
AL: Inoveli yakho yamva nje, Iinyembezi zikaClaire Jones, yapapashwa kunyaka ophelileyo, ngo-2017, ngaba sele ikhona iprojekthi elandelayo? Ngaba ungomnye wabo baqala inoveli elandelayo nje ukuba enye yokugqibela iphele, okanye ngaba ufuna ixesha lokuyila ngokutsha?
BGH: Zonke izihlandlo zahlukile. Iinyembezi ... indibize kakhulu ngoba phakathi bendibhale enye eyahlukileyo kwaye bendifudukele kude kakhulu. Kodwa kule meko ndiqale kwangoko, sele ndinaye uMaría Ruiz kunye nabo bonke abalinganiswa kunye neemeko entlokweni yam kwakhona, ke umzimba wam wawufuna. Ndicinga ukuba iya kuba namandla kakhulu.
AL: Ukubhala ngobugebenga: Iqonga lababhali abatsha eliza kwaziwa okanye umonakalo ongenakulungiseka kwimveliso yoncwadi?
BGH: Ayingomonakalo kwimveliso, eya kuthi iqhubeke phakathi kobunzima nobucekeceke, kodwa kwiipokotho zethu. Bubusela ithambile. Andizukuba nayo imvuthuluka kwityala lolwaphulo-mthetho!
AL: Ngaphandle komfanekiso wesiko wombhali ongenisiweyo, ovalelweyo kwaye ngaphandle kokubhengeza eluntwini, kukho isizukulwane esitsha sababhali abasebenzisa ii-tweets mihla le, kuba uthungelwano lwabo loluntu ziyifestile yabo yonxibelelwano kwihlabathi. Bunjani ubudlelwane bakho neenethiwekhi zentlalo? Yintoni enzima ngakumbi kwiBarna González Harbour, icandelo lakhe njengentatheli evulelekileyo emhlabeni okanye yombhali onomona ngemfihlo yakhe?
BGH: Lulwalamano endinalo olubi kakhulu, oluhlala lundikhathaza. Kunzima kakhulu kum ukudibanisa iigorila zam ezimbini apho kunokuba kubomi bokwenyani. Kodwa ndicinga ukuba unxibelelwano kwinkulungwane yama-XNUMX -ngumbhali okanye intatheli- ayinakubakho.
AL: Iphepha okanye ifomathi yedijithali?
BGH: Ndifunde kuzo zonke iifomathi.
AL: Unjani uBerna kwindima yokufunda? Zithini iincwadi kwilayibrari yakho ozifunda rhoqo kwiminyaka embalwa kwaye uhlala ubuya ukonwabela okokuqala? Nawuphi na umbhali onomdla kuye, ngaba uhlobo oluthengayo kuphela okupapashiweyo?
BGH: Thixo wam, ukufunda uncwadi olulungileyo likhoboka eliphantse lalifana nokuzama ukulibhala. Ndiyakonwabela ukufumanisa ababhali abatsha, ngakumbi abavela kuMbindi noMzantsi Merika, bethanda izingqisho ezintsha, amaxesha, izimbo, iingxoxo, amazwi. Bangcangcazelisa indlela yokubala. Ngoku I-Uruguay ukusuka kuMair, Ixesha lenkanyamba nguFernanda Melchor, Iseti engenanto nguVerónica Gerber xa sinolwazi. Ukulinda ndinako Ubukhulu obungaziwayo nguNona Fernández xa sinolwazi. Ngokumalunga nababhali abaphambili, uya kuhlala ehlala ezingalweni zaseMelville, eBorges, eProust naseNooteboom.
AL: Okokugqibela, ndiyakucela ukuba unike abafundi okungakumbi ngokwakho: Ngawaphi amaxesha okhethekileyo obuchwephesha? Ezo uya kuzixelela abazukulwana bakho.
BGH: Ezam zezam, uxolo. Ndizama ukuthetha nabantwana bam malunga nezifundo zabo, izihlobo zabo, izinto zabo nezinto ezincinci, njengaye wonke umntu, eyona nto inkulu ikhoyo. Izifundo zethu zininzi. Ukuba ngenye imini ndinabazukulwana ndiza kuzama ukwazi ukuba bangantoni ngaphakathi.
Enkosi, iBerna González Harbour, ndinqwenela ukuba niqhubeke nokuqokelela impumelelo kumceli mngeni ngamnye eniwenzayo kwaye niqhubeke nokusinika iinoveli ezininzi ezintle kunye namanqaku amahle esiza kujonga ngawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Udliwanondlebe noBerna González Harbour, umbhali woluhlu lolwaphulo-mthetho olucacisa umgcini uMaría Ruiz.